वाम गठवन्धनले प्रचण्ड माओवादीपनि हल्लियो, महरा र नेता पुनपनि पार्टी छोड्ने मोडमा • Nepal's No. 1 Digital News Paper .
वाम गठवन्धनले प्रचण्ड माओवादीपनि हल्लियो, महरा र नेता पुनपनि पार्टी छोड्ने मोडमा
काठमाडौं । उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महरा र अर्का नेता वर्षमान पुनले वाम गठबन्धनप्रति असन्तुष्ट देखिएका छन् । वाम गठबन्धन बनाउन महरा र पुन दुवै असहयोगी हुने संकेत देखेपछि दाहालले ती दुवै नेतालाई छाडेर गृहमन्त्रीसमेत रहेका जनार्दन शर्मालाई सक्रिय बनाएका थिए ।
एमालेसँग तत्कालका लागि चुनावी तालमेल गर्ने र निर्वाचनपछि एकीकरण प्रक्रियामा जाने निर्णयमा महरा र पुनले विमति जनाएका हुन् । दुवै नेताले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालमाथि निरन्तर दबाब बढाइरहेको चर्चा माओवादी वृत्तमा छ । दाहालले उतिवेला ओली सरकार ढालेर कांग्रेससँग गठबन्धन बनाउन महरा र पुनलाई सक्रिय बनाएका थिए । परिणामस्वरूप, भारतसम्म पुगेका महराले ओली सरकार ढाल्ने वातावरण बनाउन भूमिका खेलेका थिए । त्यसैले पनि महरा र पुन कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने अडानमा रहेका हुन् । नेता पुन चुनावी तालमेलको घोषणा सभामा उपस्थित भएनन् । तर, महरा भने उपस्थित रहे ।
वाम गठबन्धन बनाउन महरा र पुन दुवै असहयोगी हुने संकेत देखेपछि दाहालले ती दुवै नेतालाई छाडेर गृहमन्त्रीसमेत रहेका जनार्दन शर्मालाई सक्रिय बनाएका थिए । वाम गठबन्धन प्रक्रियामा असहयोगी भएको भन्ने आलोचना भएपछि त्यसबारे जानकारी लिन खोज्दा नेता पुन सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।